Home » Lahatsoratra farany farany » | » Tonga any Afrika sy Afovoany Atsinanana ny fizahantany iraisam-pirenena
| • Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Saodiana dia mpanao dia lavitra
Nanara-maso akaiky ny rivotry ny fiovana eo amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana ny manam-pahaizana momba ny fitsangatsanganana hatramin'ny nisian'ny areti-mifindra, ary hatramin'ny vao haingana, ny angon-drakitra momba ny tapakila an'habakabaka dia mampiseho an'i Amerika, indrindra fa i Karaiba, ho hany mpanakalo lalao amin'ny fotoana tena izy. fanarenana ny dia. Na izany aza, ny angon-drakitra farany momba ny fitsangatsanganana dia mampiseho fa i Afrika sy ny Afovoany Atsinanana dia hita fa matanjaka kokoa.
Raha toa ka -2021% ny fitambaran'ny taham-pidirana maneran-tany ho an'ny fahatongavana iraisam-pirenena hatramin'ny Oktobra 77, ho an'i Afrika sy ny Afovoany Atsinanana kosa dia eo amin'ny - 68%. Ankoatr'izay, Afrika atsimon'i Sahara no mampiseho ny fampisehoana tsara indrindra isan-taona.
Raha jerena ny fahatongavan'ny Septambra-Oktobra, 71% amin'ireo mpandeha tonga any amin'ny faritra dia avy any amin'ny toerana Afovoany Atsinanana. Raha ho an'i Afrika Avaratra kosa dia mahatratra 46% ny mpandeha Visiting Friends & Relatives, ary 33% kosa i Afrika atsimon'i Sahara. Ho an'ny Afovoany Atsinanana dia 18% ihany izany, milaza fa ny fandehanana eto dia natao ho an'ny fialam-boly indrindra.
Nandritra ity areti-mifindra ity, ny zom-pirenena ambony indrindra nandeha nivoaka tao amin'ny faritra dia: Saudis. Nanaraka izany avy eo ny Emiratis sy Qataris.
Raha ampitahaina amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny faritra hafa, ny zom-pirenena telo ambony dia samy nanana ny tahan'ny vaksiny avo kokoa, ny fifandraisan'ny sidina ary ny toe-piainana mora kokoa raha ampitahaina amin'ny hoe Afrika Atsimo, izay tratry ny raharaha Covid vaovao sy ny fitsipika fanakatonana henjana.
Ny zeroing ao Dubai, mpilalao lehibe amin'ny fiaramanidina sy ny dia lavitra, ny angon-drakitra momba ny tapakila amin'ny fiaramanidina dia manambara fa nidina 64% ny isan'ny fahatongavan'ireo namandrika nanomboka tamin'ny Novambra 2021 - Aprily 2022, matetika ny vanim-potoana faratampony ho an'ny fitsangatsanganana fialamboly iraisam-pirenena.
Amin'ny lafiny iray, nisy fitomboana voamarika ho an'ny dia avy any Egypta mankany Dubai ary ny isan'ny fitsangatsanganana US On-The-Book (OTB) dia nidina 13% fotsiny raha oharina tamin'ny vanim-potoana talohan'ny areti-mifindra. Ary koa, nitombo avo roa heny ny halavan'ny fijanonana isan-taona, nitombo avy amin'ny 7 andro ka hatramin'ny 14 andro isaky ny famandrihana.
Ny vaovao tsara hafa hojerena dia ny fitsangatsanganana ara-barotra mankany Emirà Arabo Mitambatra dia eo amin'ny lalana tsara mankany amin'ny fanarenana, mahatratra 75% amin'ny herinandro manomboka ny 21 Oktobra raha oharina amin'ny 2019, tohanan'ny hetsika mivantana toa ny Dubai Expo.
Nanampy izy hoe: “Tamin'io vanim-potoana io ihany, dia nahazo 7% amin'ny tsena ny fitsangatsanganana kilasin'ny kabine Premium raha oharina tamin'ny taona 2019. Ny mpitovo sy ny mpivady no tena mandeha any amin'io faritra io. Taorian'ny fanokafana ny Dubai Expo tamin'ny volana oktobra dia nitombo ny dia mankany UAE ary 35% monja taorian'ny haavon'ny taona 2019 - mandeha amin'ny lalana marina ho an'i Dubai sy ny faritra amin'ny ankapobeny.